जर्मनीका केही घरधनीहरुले गुगलको स्टि्रट भ्यूमा आफ्नो घर देखिएको भन्दै उजूरी गरेका छन् । उनीहरुले गुगल गल्ली हर्ेर्ने क्रममा आफ्नो घरको समेत पर््रदर्शनीले चोरहरुलाई चौतारो साबित हुने भएकाले गुगलले आफ्ना घरहरु हटाउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ । ...
फेसबुकले गर्ने भयो ह्याकरहरुको प्रतिस्पर
सफ्टवेयर निर्माणमा पोख्त प्रोग्रामरहरुको प्रतिभालाई निखार्न अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले प्रतियोगितात्मक हृयाकर्स कप आयोजना गर्ने भएको छ । ...
Shangri-La Cricket Academy
What began asagroup game usingabat,aball andafew sticks, around 500 years ago, cricket has gone on to become the 3rd most popular sport in the world. ...
होटल ध्वस्त पार्ने काइदा
लुकाइएको क्यामेराबाट तपाईंको गतिविधि खिचिँदैछ भनेर कसैले तपाईंलाई जानकारी दियो भने के गर्नुहुन्छ - पक्कै पनि खोज्न थालिहाल्नु हुन्छ । आखिरमा आफ्नो निजत्व कसलाई पो मन पर्दैन र - ...
सहायक चालक व्यस्त हुँदा...
कहिलेकाहीँ प्लेन चढ्नेहरु यति अत्तालिनुपर्ने स्थिति आउँछ कि के भन्ने - यस्तै घटना हालै दर्ुबईमा घट्न पुग्यो । दर्ुबईको एयरपोर्टबाट भारतको पुणे उडिरहेको प्लेन आकाशमा नै उँधोमुन्टो लाएर र्झन थालेपछि नअत्तालिएर पनि के गर्नु ! ...
केरालाई मोजार्टको सङ्गीत
कहिलेकाहीँ महँगो सङ्गीत वनस्पतिले पनि सुन्न पाउँछन्, यो कम्ता लोभलाग्दो कुरा होइन । हालै जापानका कृषि वैज्ञानिकहरुले मीठो, स्वादिलो, आकर्ष फल प्राप्त गर्नका लागि रुखबिरुवाहरुलाई सङ्गीत सुनाउनुपर्ने निश्कर्षा पुगेका छन् । ...
पूर्वप्रेमीको अचम्मको माग
जर्मनीका एक व्यक्तिले आफ्नी पूर्व गलःप|mेन्डको छाति उन्नत बनाउन गरेको लगानी अहिले फिर्ता मागेका छन् । कार्सन नामक ती व्यक्तिले सन् २००९ मा आफ्नी पूर्वप्रेमिकाको छातिलाई आकर्ष बनाउन गरेको लगानी अहिले फिर्ता मागेका हुन् । स्थानीय बिल्ड न्यूजपेपरका अनुसार अनास्टासिया नामक ती महिला अहिले प्रहरीसँग सुरक्षाका लागि हारगुहार गरिरहेकी छिन् । ...
बेलायतका एक फोटोग्राफरले हालै निकालेको क्यालेन्डर विवादमा परेको छ । यसको मूल कारण चाहिँ, क्यालेन्डरको मुख्य आकर्षा नै सडकमा मृत्यु बेहोर्न पुगेका जनावर, कीरा फट्याङ्ग्रालाई क्यालेन्डरको मुख्य तश्वीर बनाइएको छ । क्यालेन्डरको नाउँ नै 'रोडकिल क्यालेन्डर' नाउँ दिइएको छ । ...
धन्न जोगियो ज्यान !
एक जना ठूलोखाले ट्रक -लरी) चालकले सडकको भ्रममा अन्तै ट्रक कुदाएपछि झन्नै दर्ुघटना हुन पुग्यो । तर चालकले चाहिँ आफ्नो ट्रकको ब्रेक फेल भएका कारण ट्रक सडक छाडेर अन्तै दगुरेको बताएका छन् । ४० टनभन्दा बढी कोइला बोकेर बेपत्तासँग हुइँकिरहेको उक्त लरी दक्षिण-पश्चिमी क्विङझेनस्थित कोइलाखानीबाट निस्किएलगत्तै दर्ुघटनामा परेको थियो । ...
महिलाले अपनाइन पन्ध्र सय कुकुर
चीनकी एक महिलाले आफूले अपनाएका बच्चाजस्ता कुकुरको हेरचाहका लागि नियमित रुपमा गरिरहेको काम पनि त्यागेकी छिन् । हा वेन्जिनले कुकुरहरुको हेरचाहका लागि मज्जाले चलिरहेको व्यापार करियर मात्रै त्यागिनन्, कुकुरकै सेवाका लागि कार र घर बेचिन् । आफूले लगाउने गहनागुरिया बेचेर कुकुर संरक्षण केन्द्र खोलेकी छिन् । उनको उक्त केन्द्र नानजिङ प्रान्तको ताङक्वान काउन्टीमा रहेको छ । ...
हर्ेदाहर्ेर्दै प्लेन खस्यो
अर्जेन्टिनी आकाशमाथि प्लेनको चर्तिकला देखाउँदै गर्दा प्लेन दर्ुघटना भएको तर् दर्शकले खुला आँखाले देख्न पाए नै, तर प्लेन चलाइरहेका पाइलट चाहिँ अचम्मै किसिमले दर्ुघटनाबाट बाँचेको देख्न पाउँदा चाहिँ दर्शकहरुले अचम्म माने । ...
आफ्नै दाह्री खान बाध्य पारियो
अमेरिकाको केन्टुकी निवासी एक व्यक्तिका दर्ुइ जना मिल्ने साथीहरुले आफूमाथि बर्बर यातना दिएको आरोप लगाएका छन् । ...
फूटबलकै बीचमा सुसु गर्दा...
बेलायती फुटबलका महान् खेलाडी गेरी लिनेकरले सन् १९९० को विश्व कप फूटबल खेलकै बीचमा खेलमैदानभित्रै पिसाब फेरिदिएको स्वीकार गरेका छन् । इटाली र आयरल्याण्डबीचको खेलमा पिसाबले ज्यादै च्यापेपछि उनले मैदानभित्रै पिसाब फेरिदिएको खुलासा गरेका हुन् । टेरी बुचरको आत्मकथामा यो प्रसङ्ग बाहिर आएको छ । ...
व्यस्त सडकमा प्लेन
हवाई जहाजमा भएको तेल सकिएर दर्ुघटना निम्त्याउनु भन्दा बरु व्यस्त सडकमै प्लेन तेर्‍याउनु राम्रो, होइन र - यस्तै भयो ५८ वर्षो एक पाइलटलाई । ...
Data 46 - 60 of 2875 [Total 192 Pages]